कुन दिशामा सिर राखेर सुत्नाले सुख प्राप्त हुन्छ?, कुन दिशामा सुत्दा बेफाईदा? जानिराखौ ! – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /रोचक/कुन दिशामा सिर राखेर सुत्नाले सुख प्राप्त हुन्छ?, कुन दिशामा सुत्दा बेफाईदा? जानिराखौ !
कुन दिशामा सिर राखेर सुत्नाले सुख प्राप्त हुन्छ?, कुन दिशामा सुत्दा बेफाईदा? जानिराखौ !
निन्द्रा हाम्रो दिनचर्याको एक अभिन्न भाग हो । जब हामी सुतेर उठ्छौ तब हामी फ्रेस महसुस गर्छौ । सुतेको बेलामा हाम्रो शरीर भित्र पुनः ऊर्जा जम्मा हुन्छ। सकारात्मक ऊर्जा स्वतः रूपमा आउँछ, जसले हामीलाई ठूलो मात्रामा काम गर्ने शक्ति दिन्छ। धर्मशास्त्र अनुसार सुत्ने बेलामा दक्षिण दिशापट्टि खुट्टा राखेर सुत्न हुँदैन अर्थात उत्तर दिशा तिर सिर फर्काएर सुत्नु हुँदैन। सधै पूर्व वा दक्षिण दिशातिर टाउको राखेर सुत्ने गर्नु पर्दछ। यी दुवै दिशामा टाउको राखेर सुत्नाले लामो आयु प्राप्ति हुन्छ र स्वास्थ्य पनि सही राख्छ।
ज्योतिषाचार्य आशुतोष वार्ष्णेय भन्छन् कि हिन्दू धर्ममा मानिसको मृत्युपछि व्यक्तिको सिर उत्तर दिशा तिर राखिन्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले दक्षिण दिशा तिर खुट्टा फर्काएर सुत्नु हुदैन। धर्मशास्त्रका अनुसार, यो सुत्ने प्रक्रिया सम्बन्धी पृथ्वीमा पाइने ध्रुवीय चुम्बकका आधारमा हुन्छ। धर्मशास्त्रका साथ यसको सम्बन्धमा पूर्व दिशा तिर सिर फर्काएर सुत्नाले तपाईलाई धेरै राम्रो हुन्छ र चिन्ता बढ्छ किनभने पश्चिम दिशा यमराजको हो। जब उत्तर तर्फ सिर राखेर सुतिन्छ तब मानसिक रुपले अस्वस्थ हुन्छ। यसको रगत प्रवाहमा गहिरो असर पर्छ।
खाना खाने बित्तिकै सुत्नु हुदैन। सुत्नु भन्दा पहिला ग्रन्थीहरुको अध्ययन र भगवानको स्मरण गर्नु आवश्यक छ। यदि तपाई सुत्नु भन्दा पहिला अर्को दिनको कार्य योजना बनाउनु हुन्छ भने तपाइको अर्को दिन सजिलै बित्नेछ। सुत्नु भन्दा पहिला लघुशंकाबाट निवृत्त भएर, हात-खुट्टा धोएर पुछेपछि मात्र ओछ्यानमा जानु राम्रो हुन्छ । पूर्व वा दक्षिण तर्फ सिर फर्काएर सुत्नु पर्छ। सुत्नु भन्दा पहिला भजन वा मनपर्ने सङ्गीत सुन्नाले आनन्दसँग निन्द्रा आउछ, जसबाट हाम्रो मन तनावमुक्त हुन्छ।
पूर्व वा दक्षिण दिशामा सिर फर्काएर सुत्नु वैज्ञानिक प्रक्रिया हो। यसले धेरै रोगहरूलाई टाढा राख्न मदत गर्दछ। सौर्य, संसार र ध्रुवमा आधारित छ। पोलको आकर्षणबाट दक्षिणदेखि उत्तरी दिशापट्टि हाम्रो टाउकोमा प्रगतिशील विद्युत प्रवाह गर्दछ र खुट्टाको माध्यमबाट निक्लिन्छ। यो तरीकाले सुत्नाले सजिलै खाना पचाउन मदत गर्छ। जब हामी बिहान उठ्छौं मस्तिष्क स्वस्थ रहन्छ। साथै शरीरमा स्फूर्ति राख्न मदत गर्छ।
बाया घुमेर सुत्नुको प्रक्रिया स्वर विज्ञानमा आधारीत छ। हाम्रो नाकबाट जुन हावा सासको रुपमा भित्र-बाहिर हुन्छ यसलाई नै स्वर भनिन्छ। नाकको बायाँ प्वालबाट सास लिने र छोड्ने क्रियालाई चन्द्र स्वर भनिन्छ। त्यसैगरी दाहिने पट्टिको स्वरलाई सूर्य स्वर भनिन्छ। सूर्य टोन हाम्रो शरीरमा ताप उत्पन्न गर्दछ, जसले हाम्रो शरीरलाई खाना पाचनमा मद्दत गर्दछ।
तनहुँको थानीमाई मन्दिरमा यस्ता सामग्री चढाउनुहोस, चिताएको काम पुरा हुने बिस्वास ….
शनिबार”: शनिदेवको पूजा गर्नुहोस धन-संपत्ति, सम्मानको प्राप्ति हुनेछ
यि बार जन्मिने व्यक्ति हुन्छन् भाग्यशाली, तपाई कुन बार जन्मिनुभयो ?